ကိုယ်ခံအားစနစ်ဆိုတာ ဘာလဲ ??? | OnDoctor
By OnDoctor Editor	 On Mar 26, 2020 Last updated Apr 24, 2020
ခုလို စားဝတ်နေရေးအတွက် ပိုမိုရုန်းကန်လှုပ်ရှားလာရတဲ့ခေတ်မှာ ရောဂါပိုးမွှားအသစ်အဆန်းတွေကပါ ခြိမ်းခြောက်လာတဲ့အတွက် လူတိုင်းဟာ ပုံမှန်ထက်ပိုကြီးမားတဲ့ စိတ်ဖိစီးခြင်းတွေကိုပါ ရင်ဆိုင်လာရပါပြီ။ စိတ်ဖိစီးစရာကိစ္စတစ်ခုခုနဲ့ ကြုံတွေ့ရတိုင်း လူတွေဟာ ပိုနေမကောင်းဖြစ်လွယ်ကြပါတယ်။ ဒါဘာကြောင့်ပါလဲ??
မှန်ပါတယ်.. စိတ်ဖိစီးမှုရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
– စိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာ ဘာလဲ ??? စိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာ လူသားတွေ နေ့စဉ်ဘဝမှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အရာတွေထဲက စိတ်ကိုဖြစ်စေ..ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြစ်စေ.. ခက်ခဲမှု၊ပြောင်းလဲမှု သို့မဟုတ် ဖိစီးမှုဖြစ်သွားစေတဲ့ ဘယ်အရာမဆို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စိတ်ဖိစီးစေတဲ့ အကြောင်းအရာချင်းကွဲပြားနိုင်သလို တုံ့ပြန်မှုတွေလည်း ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။
– ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မူတည်ပြီး ခဏတဖြုတ်နဲ့ပျောက်သွားနိုင်သလို ရက်ရှည်လများကြာမြင့်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုအကြီးစားတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
– စိတ်ဖိစီးမှုတစ်ခုဖြစ်လာရင်?? စိတ်ဖိစီးမှုတစ်ခုဖြစ်လာရင် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာ ပြောင်းလဲမှုများစွာ ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ – ခဏတဖြုတ်စိတ်ဖိစီးမှုတစ်ခုမှာ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ Stress ဟော်မုန်းက ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်ကို အထောက်အကူပြုပါတယ်။
ဥပမာ- အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကနေ အမြန်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေအားလုံးကို အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် ချက်ချင်းပြင်ဆင်ပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို Fight or Flight Reaction လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချိန်ကြာမြင့်စွာ စိတ်ဖိစီးလာတဲ့အခါမှာတော့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ *
ကိုယ်ခံအားစနစ်ဆိုတာ လူသားတိုင်းရဲ့ တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ခံအားစနစ်မှာ သန်းပေါင်းထောင်ချီတဲ့ ဆဲလ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဘယ်အစိတ်အပိုင်းကို မဆို လာရောက်ထိပါးနှောင့်ယှက်မဲ့ ဘက်တီးရီးယား၊ဗိုင်းရပ်စ်စတဲ့ ရောဂါပိုးမွှားတွေရန်ကနေ ကာကွယ်ပေးတဲ့ ကိုယ်တွင်းတပ်မတော်တစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ခံအားစနစ် စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းလာရင်တော့ ရောဂါပိုးတွေ ဝင်ရောက်ဖို့ ပိုမိုလွယ်ကူလာသလို ရောဂါလက္ခဏာတွေလည်း ပိုမိုပြင်းထန်တတ်ပါတယ်။ ပြန်လည်ပျောက်ကင်းသက်သာဖို့လည်း ခက်ခဲနေတတ်ပါတယ်။
– စတီးရွိုက်အပါအဝင် တချို့ဆေးဝါးတွေကို စွဲမြဲသောက်သုံးနေရတဲ့အခါ ကိုယ်ခံအားကျလာတတ်ပါတယ်
ကိုယ်ခံအားကို ဘယ်လိုမြှင့်တင်မလဲ ???
– အိပ်ရေးဝအောင်အိပ်ပါ – အာဟာရစုံလင်မျှတအောင် စားသောက်ပါ
– ဆေးလိပ်၊ အရက် ၊ ကွမ်း ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရှောင်ပါ
– ဗီတာမင်စီ ပါဝင်တဲ့ အားဆေးတစ်ခုခုသောက်ပါ
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်အတွက် ကြောက်တာအပြင် ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တာဘာရှိလဲ